पर्समा यस्ता चिज राख्नुहोस्, कहिल्यै पैसाको अभाव हुँदैन (टिप्ससहित) - Lokpath Lokpath
प्रकाशित मिति : २०७६, २ आश्विन बिहीबार १३:५१
काठमाडौं । मानिसहरु अहिले धन कमाउनकै लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । तर धन कमाउन चाहँदैमा धन कमाइने भने होइन । धन त्यसै प्राप्त हुने चिज पनि होइन । कसैलाई धनको अभाव जिन्दगीभर रहँदैन भने कोही सधै जीन्दगीभर धनको अभावमा बाँचेका हुन्छन् । त्यो अवस्था हाम्रा परिश्रम मेहनेत र आनीबानी र संस्कारमा पनि भर पर्दछ । धेरै मानिसहरुको समस्या नै हुने गर्दछ पैसा जोगाउन नसक्नु । पैसा जति कमाए पनि केहि मानिस पैसा जोगाउने सक्दैनन् ।
वास्तुशास्त्र अनुसार केही यस्ता चिज छन्, जुन तपाईले सधै पर्समा राख्नुभयो भने पैसाको कमी हटेर जान्छ। पैसा हातमा नटिक्ने धेरैको समस्या हुन्छ। यस्ता केही चिज छन्।
वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा राख्नु पर्ने यी ९ कुराको चर्चा गरिएको छ । यी कुरा पर्समा राख्दा पैसाको अभाव हुँदैनः
१. बुधबारका दिन कुनै किन्नर वा समलिंगीको हातबाट थोरै पैसा लिने र त्यसलाई आफ्नो पर्सामा राख्ने ।
२.शुक्रबारको दिन पारेर महालक्ष्मीको तस्वीर पर्समा राख्नुस्, यसो गर्नाले पनि तपाइलाई पैसाको अभाव हुन नदिने वास्तु शास्त्रको विश्वास छ । पुरुषहरुले भने पर्समा लक्ष्मीको फोटो नराखेकै राम्रो हुन्छ । किनभने पुरुषहरुले पर्स पछाडी बोक्ने गर्छन् ।लक्ष्मीको फोटो पछाडी राख्नु नराम्रो मानिन्छ ।
३.पर्समा लक्ष्मीलाई चढाइएको वा पुजामा प्रयोग गरिएको एक चिम्टी चामल राख्दा पनि सकारात्मक उर्जा बन्ने वास्तु शास्त्रको विश्वास छ । यस्तो चामललाई कागजमा पोको पारेर पर्समा राख्नु उचित हुने मानिन्छ ।
६. रातो रंगको कागजमा आफ्नो इच्छा लेखेर रातो रातो रेसमी डोरीले बाँधेर पर्समा राख्दा पनि शुभ मानिन्छ ।
पिपलको पातलाई अभिमन्त्रित गरि श्रीम: लेखेर पर्समा राख्ने । यसो गर्दा पनि पनि पैसाको अभाव खड्कीदैन । विशेषत: पिपलको पात शनिवार वा शुभ दिन पारेर टिप्नुपर्छ ।
७. ठुलावडाको आशिषमा मिलेको पैसा पर्समा राख्नु पनि अति नै उत्तम मानिन्छ ।
८. बहुमती चक्रलाई पर्समा राख्दा पनि सकारात्मक उर्जा बन्ने वास्तु शास्त्रको विश्वास छ ।
९.पैसाकी देवी लक्ष्मी हुन् । लक्ष्मीको कृपा भएमा पैसा हुने विश्वास गरिन्छ । यसका लागि पर्समा श्रीयन्त्र राख्नु राम्रो हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । विधी पुर्वक पुजिएको श्रीयन्त्र पर्समा राख्दा पैसाको अभाव हुँदैन ।
कस्तो चिज पर्समा नराख्ने ?
१. पर्समा अश्लिल तस्विर वा अश्लिल सामग्री नराख्नुस् । यस्ता कुराले नकारात्क उर्जा बढाउँछ । सके सम्म देवी देवताका तस्विर राख्नुस् ।
२. पैसालाई कच्याककुचुक पारेर, खुम्च्याएर वा च्यात्तिने गरि राख्नु हुँदैन ।
३. पर्समा अनावस्यक कागजात राख्नु पनि अशुभ मानिन्छ ।
शरीरका कुन अंग फर्फराउँदा के हुन्छ ? हेर्नुहोस्
एजेन्सी । हिन्दू शास्त्रमा मानिसको विभिन्न अंग फर्फराउँदा हुने विभिन्न घटनाबारे लेखिएको छ